BY YeYint Nge ... 3/21/20210comment
Sa Sa @anational virtual protest on March 20th, 2021
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ကပေးတဲ့စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းသွား တတ်တဲ့ ပဲခူးမြို့နယ်ထဲက ဆရာဆရာမများစာရင်း
ဒီနေ့ စနိုက်ပါ လက်ချက်မိပီး ကျောက်မြောင်းမှာကျဆုံးသွားတဲ့ကိုသက်ပိုင်စိုး
Nan Wutt Yee Maung
ဒီနေ့ စနိုက်ပါ လက်ချက်မိပီး
တောင်ကြီးမြို့တွင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်
တောင်ကြီးမြို့တွင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူအား အာဏာသိမ်းအုပ်စု၏ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် 21.3.2021 #TachileikNewsAgency Vdo: CJ
(ယခင်)သမဂ္ဂဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ​ဒေါ်​ရွှေမှုန်၊ လှိုင်သာယာတွင် အလှူလုပ်ရန်အသွား ဖမ်းဆီးခံရ
တောင်ကြီးမြေဖြူနယ်မြေက ပြည်သူ တစ်‌ယောက်ကို သေနတ်နဲ့အနီးးကပ်ပစ်ပြီး ခွေးတွေဆွဲခေါ်သွား
မန်းလေး ၈၃+၄၀ လမ်း ၁၅ နှစ် ကလေးကိုပစ်ခတ်ပြီးကားေပါ်တင်
တောင်ကြီး ရတနာသီရိ ရပ်ကွက်
ခေါင်းစဉ် 22222 Remarkable video, Humanitarian Activities
PPP ဒုဉက္ကဌမိုးယံဇွန်အဖေ အဆိုတော် ခိုင်ဝါယောင်္ကျားအသက်ကြီးပြီးအချိန်မစီး
Tap here to start composing...
We Love Yangon အဖွဲ့ကို တပ်နဲ့ရဲစီးနင်းစဥ် အမျိုးသမီး ၁ ဦး ၅ လွှာမှပြုတ်ကျရုပ်သံ
5လွှာတက်ဖမ်းတာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပြုတ်ကျအခုတော့ ဆုံးပြီတဲ့ ၂၁ မတ်လ၊ ၂၀၂၁
Edit >> တွန်းချခံရတာလို့ပြောတယ် 😓
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် 91လမ်း Source >> 91လမ်း #Video_crd
We Love Yangon အဖွဲ့ကို တပ်နဲ့ရဲစီးနင်းစဥ် အမျိုးသမီး ၁ ဦး ၅ လွှာမှပြုတ်ကျ
မဂ်လာတောင်ညွန့် ၉၁ လမ်းမှာရှိတဲ့ we love yangon ပရဟိတအဖွဲ့ကို ဒီကနေ့ နေ့လည်ခင်း ၁၁ နာရီခွဲလောက်က ရဲနဲ့စစ်တပ်အင်အားအများအပြားဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ we love yangon ရဲ့ရုံးတံခါးတွေဖျက်ဆီးပြီးရုံးခန်းထဲဝင်ရောက်ပြီး ပြည်သူတွေကလှူဒါန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ယူဆောင်သွားတဲ့အပြင် စတင်စီးနင်းဝင်ရောက်စဥ်မှာပဲ သေနတ်တွေပစ်ဖောက်ခြောက်လှန့်ခဲ့တဲ့အတွက် we love yangon ရုံးခန်းရှိတဲ့တိုက်အပေါ်ထပ်ငါးလွှာမှ မိန်းခလေးတဦး ပုန်းအောင်းရင်း ၅လွှာမှပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။
တောင်ဥက္ကလာမှာ ဖုန်းဆိုင်ကို ညဘက် ဝင်ဓားပြတိုက်
(၁၉.၀၃.၂၀၂၁) တောင်ဥက္ကလာမှာ ဖုန်းဆိုင်ကို ညဘက် ဝင်ဓားပြတိုက် တန်ဖိုးရှိတာတွေ အကုန်ယူသွား ငြိမ်ခံနေရင် ပိုဆိုးဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်
South Oakkalapa: terrorists broke into mobile phones & accessories shop, vandalized & robbed all the smartphones & valuable items last night. Shop owner couldn’t report to anyone as polices & soldiers are the one who committed the crime. #WhatsHappeningInMyanmar #Mar19Coup
Source - https://www.facebook.com/100012340021876/posts/1113378639083460/?d=n
မကျေနပ်ဘူးဟေ့ ဒီနေ့ ၁နာရီအောင်ပင်လယ်ထဲခွေးတွေဝင်ကိုက်သွားတယ်… ခြောက်ယောက်ထိတယ် ကိုယ့်လမ်းထဲကတယောက်ပေါင်ထိသွားတယ် ခြောက်ယောက်အပစ်ခံလိုက်ရတယ် ဒင်းတို့ကို အမှုန်ခြေပစ်ချင်တယ် သတ္တိရှိရင် သေနပ်ယူမလာနဲ့ One by one ဘဲ လက်နက်နဲ့လာပြီး ဂန်မကျယ်ကြနဲ့ အဲဒါသတ္တိရှိတာမဟုပ်ဘူး #M :Szo(Mdy) 21 /3 /2021
၂၁. ၃.၂၀၂၁ မုံရွာ စက်မှုဇုန် အမှတ်(၂)ရဲစခန်းအနီး ညနေပိုင်းထပ်ပစ်
107 * 57/58 ကြားမှာပါ။
Molotov Cocktail ကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲ
People Attack Force
🤔🔥 Just 2mins Molotov Test with engine oil and without engine oil #PAF
ရန်ကုန် မဂ်လာတောင်ညွန့် ၉၁ လမ်းမှာရှိတဲ့ we love yangon ပရဟိတအဖွဲ့ကို ဒီကနေ့ နေ့လည်ခင်း ၁၁ နာရီခွဲလောက်က ရဲနဲ့စစ်တပ်အင်အား အများအပြားဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ we love yangon ရဲ့ရုံးတံခါးတွေဖျက်ဆီးပြီးရုံးခန်းထဲဝင်ရောက်ပြီး ပြည်သူတွေကလှူဒါန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ယူဆောင်သွားတဲ့အပြင် စတင်စီးနင်းဝင်ရောက်စဥ်မှာပဲ သေနတ်တွေပစ်ဖောက်ခြောက်လှန့်ခဲ့တဲ့အတွက် we love yangon ရုံးခန်းရှိတဲ့တိုက်အပေါ်ထပ်ငါးလွှာမှ မိန်းခလေးတဦး ပုန်းအောင်းရင်း ၅လွှာမှပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။
Sa Sa @anational virtual protest on March 20th, ...
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ကပေးတဲ့စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းသ...
ဒီနေ့ စနိုက်ပါ လက်ချက်မိပီး ကျောက်မြောင်းမှာကျဆုံး...
(ယခင်)သမဂ္ဂဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ​ဒေါ်​ရွှေမှုန်၊ လှ...
တောင်ကြီးမြေဖြူနယ်မြေက ပြည်သူ တစ်‌ယောက်ကို သေနတ်နဲ...
မန်းလေး ၈၃+၄၀ လမ်း ၁၅ နှစ် ကလေးကိုပစ်ခတ်ပြီးကားေပါ...
PPP ဒုဉက္ကဌမိုးယံဇွန်အဖေ အဆိုတော် ခိုင်ဝါယောင်္ကျာ...
We Love Yangon အဖွဲ့ကို တပ်နဲ့ရဲစီးနင်းစဥ် အမျိုးသ...
၂၁. ၃.၂၀၂၁ မုံရွာ စက်မှုဇုန် အမှတ်(၂)ရဲစခန်းအနီး ...
We Love Yangon အဖွဲ့ကို တပ်နဲ့ရဲစီးနင်းစဥ် အမျိုး...